Shree Janajyoti Higher Secondary School – Janajyoti Higher Secondary School
Welcome Jana Jyoti Higher Secondary School
Shree Janajyoti Higher Secondary School Bullding
Janajyoti Program Photo
School Program with Special Guest
Student Extra Activities
Welcome To Jana jyoti Higher Secondary School
आजभन्दा एक बीस दुई हिउँद अगाडिको कुरा हो, म त्यतिबेला चण्डेश्वरी उ.मा.वि. मरिण डाढीमा काम गर्थेँ । मेरो घर क.न.पा. वडा नं.६ रातमाटा, बसाइ मरिण डाढीको । मलाई घर पायक नभएका कारण सिन्धुलीमा आउन चाहान्थेँ, नभन्दै मेरो सरुवा पनि यसै विद्यालयमा भयो । म जनज्योति उ.मा.वि. हालको यस विद्यालयमा आउँदा विद्यालयको स्थिति दयनीय थियो । प्रस्तावित मा.वि. चलेको त्यतिबेला मेरा आदरणीय गुरु अम्बरदीप देवकोटा प्र.अ. तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री माणिक ढकाल हुनुहुन्थ्यो । २०४५ सालमा भरखरै भु–कम्प गएको थियो । विद्यालयहरु क्षतिग्रस्त थिए । त्यसैलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट ट्रस्ट राखेर विद्यालय भवन निर्माण गरिएकोले स्कुल हेर्न लायक भयो ।
समयको गतिसँगै २०५५ पुस महिनामा अम्बरदीप सरले विद्यालय छाड्नु भयो । उहाँले चलाइराखेको विद्यालय त्यही गतिमा हिंडाउन चुनैतिको विषय थियो । आपूmले प्र.अ. पदको कुनै अपेक्षा पनि गरेको थिइँन । तर २०५५।९।९ गते मैले प्र.अ.को जिम्वेवारी पाएँ । पहाडले थिचे जस्तै लाग्यो । वास्तवमै काम गर्ने हो भने यस्ता पदहरु साँच्चै बोझिला हुने रहेछन् ।
मा.वि.बाट उ.मा.वि. चलाउन ठूलै कसरत गरियो । अम्बरदीप सर यो समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहन्थ्यो । गाउँगाउँका अभिभावक सहितको टोली बनाएर साधारण, आजिवन र विशिष्ट सदस्य तीन खाले सदस्यता निर्धारण गरेर पैसा संकलन गरियो । स्कुलको खातामा झण्डै चारलाख रुपैयाँ जम्मा भयो । हामीलाई आवश्यक पर्ने रकम कम्तिमा पनि आठलाख थियो । अब नपुग रकम कहाँबाट जम्मा गर्ने ? हाम्रो अगाडि प्रश्न खडा भयो । अन्तत्वगत्त्वा हामीले गौमती उ.मा.वि. माढी बजारसँग औपचारिक रुपमा वैठक बसेर केही समयका लागि सापटी रकम माग्यौँ । गौमती उ.मा.वि.माढी बजारबाट रकम प्राप्त भएपछि +२ पनि संचालन ग¥यौं । त्यसको लगत्तै वि.एड्. र स्नातकोत्तर तह नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयमा संचालन गर्न पुग्यौँ । साधारण शिक्षा तर्फ विद्यार्थीको त्यति आकर्षण नदेखे पछि २०६८ सालमा कृषि जेटिएको कक्षा प्रारम्भ गरियो । त्यसपछि २०७२ सालको मंसिर महिनादेखि क्ष्।क्अ।ब्न। को कक्षा संचालन ग¥यौँ । साथै हाल दश जिल्लाका भु–कम्प पिडित छात्र÷छात्राहरु ऋत्भ्ख्त् मार्फत निशुल्क अध्ययन समेत गरिरहेका छन् ।
यसरी एउटै छातामुनि बालकक्षादेखि स्नातकोत्तर तहसम्म, सुस्त मनस्थिति (वौद्धिक अपाङ्गता) कक्षा देखि आइ.एस्सी.एजि.सम्मका छात्र÷छात्राहरु विहानदेखि साँझसम्म ओहोरदोहोर गरेको देख्दा आपूmले विताएको बाइस वर्ष बितेको कुनै अत्तोपत्तो नभएको जस्तो लाग्छ । गैँयाटार र ढकालगाउँको फेदीमा अवास्थित यो विद्यालयको पहिचान र रौनक अरुभन्दा पृथक बन्न पुगेको छ । यसको श्रेय यसै भेगका अभिभावक र प्यारा विद्यार्थी भाइबहिनालाई नै दिन चाहान्छु । तसर्थ “हाम्रो विद्यालय राम्रो विद्यालय”, “हाम्रा बालबालिका राम्रा बालबालिका” भन्ने नाराका साथ विद्यालय अगाडि बढिरहेको छ । हामी शिक्षक स्टाफ यिनै बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको सपना बुन्दै रखबारी र खबरदारी गरेर बसीरहेका छौं । त्यही समूहभित्र म आफू पनि रमाइ रहँदा आज पत्तै नपाई २२ वर्ष बिति सकेछ ।
Message From Principles
समयको गतिसँगै २०५५ पुस महिनामा अम्बरदीप सरले विद्यालय छाड्नु भयो । उहाँले चलाइराखेको विद्यालय त
Shree Janajyoti Secondary School
Address: Kamalamai-5, Milanchock Phosretar
Mobile: +977-9844040065, 9844085610
© Copyright | 2017-2020 | All Rights Reserved by: Shree Jana Jyoti Higher Secondary School | Powered By : Megabyte Tech